#MYANMAR #breakingnews #ကျောင်းသားသပိတ်ချီတက်မှုကို #ဒီမိုကရေစီပညာရေးလှုပ်ရှားမှု(ရန်ကုန်) #clip | democracy for burma
tags: ဒီမိုကရေစီပညာရေးလှုပ်ရှားမှု(ရန်ကုန်), ပင်မ သပိတ်စစ်ကြောင်း - လက်ပံတန်း, ရဲလုံခြုံရေး, ကျောင်းသားသပိတ်ချီတက်မှုကို,့ တော်ခန်းမအနီးတွေ့ ရစဉ်, Burma, CLIP, DKBA, Myanmar, Protest, student march
ရဲလုံခြုံရေး ကားများကို မြို့ တော်ခန်းမအနီးတွေ့ ရစဉ် 4.3.2015.5း15pm DKBA ကလိုထူးဘော စစ်ဌာနချုပ်
ဒုတိယမြောက်နေ့အဖြစ် ကျောင်းသားသပိတ်ထောက်ခံပွဲနှင့် အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းမှုများ ဆန့်ကျင်ရှုံ့ချပွဲကို သိမ်ကြီးဈေးမှ စတင်ပြီး ရန်ကုန်မြို့မှာ ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်နေပါပြီ =================== =================== Aye Mya Mya Myo ဖေစ့်ဘွက်မှ ကူးယူဖေါ်ပြပါသည်။ မတ်လ ၄ ရက် ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ၄.၃.၂၀၁၅ ညနေ ၄ နာရီခွဲတွင် သိမ်ကြီးဈေး၌ လုံခြုံရေးအင်အားအများအပြားကြားမှ ဒီမိုကရေစီပညာရေးအတွက် သပိတ်မှောက်ကျောင်းသားများအား ထောက်ခံဆန္ဒပြပွဲ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ် ဆန္ဒဖော်ထုတ်တဲ့ အဖွဲ့မြို့ တော်ခမ်းမရှေ့ ရောက်နေပါပြီ။ BREAKING NEWS(JUST NOW) ———————— ဒီမိုကရေစီပညာရေးလှုပ်ရှားမှု(ရန်ကုန်) ။ ။။ ။ ။ ။ ။ ။ ။။ ။။ ။ ။ ။ ။။ ။ ။။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ယနေ့ ညနေ ၄း၃၀ နာရီဝန်းကျင်မှာ ကျောင်းသားသပိတ်ချီတက်မှုကို ထောက်ခံတဲ့ ဆန္ဒပြ ချီတက်မှု တစ်ခုကို ရန်ကုန်မြို့ သိမ်ကြီးဈေး ဂုံးကျော်တံတားပေါ်ကနေစတင်ခဲ့ပါတယ်။ သိမ်ကြီးဈေးကနေ မဟာဗန္ဒုလ လမ်းအတိုင်း ဆက်လက်ချီတက်ကြပါတယ်။ cr. Ko Myat Kyaw Share this:TwitterFacebookPrintPinterestRedditLike this:Like Loading...
from → Burma, MYANMAR, STUDENTS, YANGON
← !!!! #MYANMAR: #no #horrors of #1988 #uprising to be #repeated. I #wanta#peaceful #solution.
!!! #DKBA #ကလိုထူးဘော #စစ်ဌာနချုပ် #ရက်စွဲ – ၄.၃.၂၀၁၅ →